Home Wararka Puntland oo Galmudug ku wareejisay Baabuurtii dagaalka ee Kheyre laga qabsaday
[XOG] Puntland oo Galmudug ku wareejisay Baabuurtii dagaalka ee Kheyre laga qabsaday
Bishii April ee Sanadkii hore 2020 ayaa waxaa Dowlada Puntland gacanta ku dhigtay 30 gawaari oo ah nooca dagaalka ee loo yaqaano Tiknikada iyo gawaarida ambalaasta ee dhawacyada lagu qaado kuwaas oo uu soo iibsaday Xasan Cali Kheyre. (HALKAN RIIX)
Xasan Cali Kheyre oo markaa Ra’isul Wasaaradda JFS ayaa Gawaarida u soo iibsaday ciidan gaar ah oo la qorsheynayay in aay ilaalo ka noqdo ceelka shidaalka ee Mareeg oo markaas uu Kheyre iyo shirkaddiisa SOMAOIL & GAS aay wadeen in la bilaabo soo saaridda kheyraadka shidaalka Soomaaliya.
Gawaaridaas oo ka soo degay dekedda Boosaaso aya waxaa gacanta ku dhigay Dowlad Goboleedka Puntland, kaddib markii uu diiday Kheyre in uu sheego in Gawaarida uu isaga leeyahay loona wado deegaanka Mareeg.
Gawaarida ayaa toddoba ka mid ah waxaa uu hoggaanka Puntland siiyay maamulka Gobolka Mudug oo dagaal ba’an kula jira kooxda Shabaab.
Haddaba maxaa dhacay oo maanta Gawaaridaas loogu wareejiyay Galmudug?
Guddoomiyaha Gobolka Mudug Cabdiladiif Muuse Nuur (Sanyare) ayaa waxaa Madaxweyne Deni uu u ballan qaaday in uu ku darayo wakiilada Aqalka Sare, Sanyare ayaa aad u dhibsaday dagaalka joogtada ah ee Shabab taasoo dhowr jeer uu ka badbaaday isku day aay soo maleegeen kooxda Shabab.
Sanyare ayaa waxaa filan waa ku noqotay markii iska waayay liiska wakiilada Aqalka Sare, waxaana intii ka danbeysay markaa mugdi uu soo kala dhex galay Sanyare iyo Deni. Guddoomiye Cabdiladiif Sanyare ayaa ka mid ah xisbiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur waana midda keentay in uu Deni uu ku aamini waayo kamid noqoshada wakiilada Aqalka Sare.
Sida MOL aay xogta ku heshay Sanyare ayaa bilaabay ficilo uu ku muujinayo sida uu uga soo horjeedo siyaasadda Doorashada ee Deni wuxuuna maalmo ka hor abaabulay Odayaasha dhaqanka beesha Cumar Maxamuud kuwaasoo eedeeymo cusub dusha ka saaray Deni, iyagoo ku eedeeyay in uu ku tagri falayo awoodda Puntland uuna doonaya in uu majaxaabiya Isimida Puntland oo marjac u ah siyaadda Puntland.
Waxaa layaab ku noqotay maamulka Puntland kaddib markii maanta uu sheegay Cabdiladiif Sanyare in uu maamulka Galmudug ku wareejiyay Gawaarida Dagaalka oo toddoba ah, kuwaasoo horay uu Kheyre ugu soo iibiyay in aay ka howlgalaan maleeshiyo loogu talo galay ilaalinta shidaalka Mareeg oo markii danbe suuro galiwaysay taasoo qeyb ka ah isku dhicii xilka looga tuuray Kheyre bishii Luulyo ee sanadkii 2020.
Deni oo Qorsheynaya in uu xilka ka qaado Sanyare:
Sida masuuliyiin ka tirsan maamulka Puntland aay MOL u sheegeen Madaxweyne Deni ayaa maalmaha soo socda qorsheynaya in uu xilka ka qaado Cabdiladiif Muuse Nuur (Sanyare) Guddoomiyaha Gobolka Mudug. Deni ayaa baadi goob ugu jira shaqsigii uu ku bedeli lahaa sida MOL loo xaqiijiyay.